My freedom: 5km Run
သုံးပတ်လောက် ပစ်ထားတဲ့ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်လေး.. လွမ်းတာ။ ခုပဲ ညစာစားပြီးတယ်။ မျှစ်ဟင်းချက်တယ်။ ကန်စွန်းရွက်ကြော်တယ်။ လိုက်တော့ မလိုက်ဘူး။ ရေခဲသေတ္တာထဲ ရှိနေတာ ချက်လိုက်တာ။ အဲ့ဒါစားပြီးတော့ မပြီးသေးဘူး။ Tortilla Chip နဲ့စားဖို့ Guacamole လုပ်တယ်။ အရမ်းကောင်း အရမ်းလိုက်..
ခုတော့ ဗိုက်ကြီးအရမ်းတင်းနေတယ် ဟဟ။ ကဲ ကဲ.. ဒီရက်တွေမှာ ဘာတွေလုပ်ပြီး အလုပ်ရှုပ်နေလဲ ပြောပြမယ်နော်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း မြန်မာစာသင်တန်းက မနက်ဖြန်ဆရာကန်တော့ပွဲပြီးရင် ကျောင်းပိတ်ပြီဆိုတော့ ကလေးတွေကို စာမေးပွဲစစ်ရတယ်။ သူတို့အဖြေလွှာတွေ အမှတ်ခြစ်ရတယ်။ အမှတ်ပြည့်ရတဲ့သူတွေ ဆုပေးဖို့ ဆုဝယ်ရတယ်။ နောက် ဆရာကန်တော့ပွဲမှာ ကဗျာရွတ်ပြိုင်ဖို့အတွက် အမူအရာလေးတွေနဲ့ ကဗျာရွတ်ကျင့်ပေးရတယ်။ သူတို့ကို မသင်ခင် ကိုယ့်ဟာကိုယ်မှန်ရှေ့မှာ အမူအရာနဲ့ ကဗျာရွတ်ကြည့်ရသေးတယ် ဟဟ ဆရာမဘ၀ဆိုတာ အဲ့လို xD
အလုပ်က လူတွေနဲ့ စာရင်းတူတူပေးထားတဲ့ CSC Run by the Bay မှာ 5km သွားပြေးသေးတယ်။ မပြေးခင်တစ်ပတ်အလိုမှာ နည်းနည်းစီ ကိုယ့်ကိုကိုယ် စ Train ရတယ်။ ကိုယ်က နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့သူမဟုတ်တော့ အဲ့လို မ Train ပဲ သွားပြေးရင် မူးလဲသွားမှာစိုးလို့လေ ဟဟဟ xD ပထမနှစ်ရက်လောက်က အိမ်မှာပဲ Aerobic ဆော့တယ်။ နောက်(၃)ရက်မြောက်နေ့ကျ 5km စမ်းပြေးကြည့်တယ်။
အိမ်ကိုပတ်ပြီး ရထားနှစ်ဘူတာစာလောက်ပြေးတာ မိနစ်(၅၀)ကြာတယ်။ အဲ့ဒါပြီးတော့ ခြေထောက်တွေ ပေါင်တွေ တောင့်တင်းပြီး နှစ်ရက်လောက် ဘာလေ့ကျင့်ခန်းမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ ဒီပုံအတိုင်းဆို တကယ်ပြေးမယ့်နေ့ကျ ငါပြေးနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး ထင်တာ (၃)ရက်မြောက်နေ့ကျ တော်တော်ကြီး သက်သာသွားတယ်။ တကယ်ပြေးတဲ့နေ့ (၄)ရက်မြောက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ကျ မနာတော့ဘူး။ 5km ကို နှစ်နာရီအချိန်ပေးတာ (၄၅)မိနစ်နဲ့ ပြေးတယ်။ ပြေးပြီးတော့လည်း ပထမတစ်ခေါက်တုန်းကလို ပေါင်တွေ တင်းမနေဘူး။ နေလို့ကောင်းတယ်။ စမ်းပြေးထားခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးပေါ့ ^_^
သွားပြေးဖြစ်တာက သူငယ်ချင်းတွေ အတင်းခေါ်လို့။ တူတူပြေးရအောင် ပျော်စရာကြီး ဘာညာနဲ့ အတင်းခေါ်နေတာနဲ့ အင်း အင်း လုပ်လိုက်တာ။ အမှန်က ပြေးတာကို ကန်ဒီသိပ်မကြိုက်ဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်က ဒီပုံစံအတိုင်း လှုပ်နေရတာ ပျင်းဖို့ကောင်းလို့လေ။ ငယ်ငယ်ထဲက Aerobic ဆော့လာတာဆိုတော့ ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ ကနေရတာကို ပိုသဘောကျတာ။ အဲ.. ဒါပေမယ့် 5km ပြေးပြီး ခံစားချက်ကတော့ မိုက်တယ်။ ငါမဆိုးဘူး... လုပ်နိုင်သားပေါ့ :)
ငယ်ငယ်က Aerobic ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရတုန်းကပုံလေး သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် လာပေးလို့။ အမှတ်တရပါပဲ။ (၄)တန်းထဲကဆော့တာ (၉)တန်းအထိ ပြိုင်ပွဲတိုင်းပါတယ်။ ကန်ဒီ့ကို တွေ့လား ဟီးဟီး(xD)။ ကိုယ့်ပုံကိုယ်ကြည့်ပြီး ရီချင်လို့... ဘာနဲ့တူနေမှန်းမသိဘူး။
သီတင်းကျွတ်လပြည့်ညက အလုပ်ကအပြန် Vivo City သွားတယ်။ အမေ့အတွက် Oven သွားဝယ်တာ။ အဖေ့အတွက်က စွတ်ကျယ်။ မရောက်တာ ကြာပေါ့။ သီတင်းကျွတ်ဆို ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ ဆွေမျိုးတွေအိမ် သွားကန်တော့တယ်။ မီးတွေထွန်းတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေ အရမ်းသတိရတယ်။
မိသားစုနဲ့ပျော်ရွှင်ရတဲ့ သီတင်းကျွတ်အခါသမယလေး ဖြစ်ပါစေရှင်..
are you the one on the rightmost?
seems your pic has been photoshopped inside.
45 minutes for 5km is not so bad for the beginner.
jia you!! =P
Absolutely right! Haha. I look so fat and the posture is not right. Lol. I am not sure they photoshopped inside or not. It'savery old photo. My friend wants to laugh at me for 5km in 45 minutes :( Thanks for your motivational words ^_^
Beginner တစ်ယောက်က ဒီလောက်ပြေးနိုင်တာ မဆိုးပါဘူး...။ ဒါနဲ့Tortilla Chip တစ်ထုပ်ဝယ်ထားတာ မစားဖြစ်သေးဘူး ကန်ဒီစားမှသတိရတယ်..အဲလို ထောပတ်သီးနဲ့လုပ်တဲ့ Dipping နဲ့ တစ်ခါလုပ်စားဖူးတာ တော်တော်ကောင်းတယ်...။
အရင်က အဲ့လိုစားရမှန်းမသိခဲ့ဘူး >.<
Big Thank You +2Years Veganniversary